WARARKA MAANTA | Bakool.net | Page 30
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Warfaafinta XFS oo dhalinyarada ugu baaqay iney ka qeyb qaataan dib u dhiska dalka
Mas”uuliyiinta iyo shaqaalaha Wasaaradda Warfaafinta Dhaqanka iyo Dalxiiska Xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta ka qayb qaadanaya ololaha Barnaamijka Isxilqaan ee lagu dhisayo Tiyaatarka Qaranka. Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Warfaafinta Dhaqanka iyo Dalxiiska Mudane C/raxmaan Yuusuf Sheekh Cadaala ayaa horkacaya mas”uuliyiinta iyo shaqaalaha Wasaaradda ee maanta ka qaybqaadanaya Isxilqaanka. C/raxmaan Yuusuf Sheikh Cadaala,agaasimaha Wasaaradda Warfaafinta Xukuumadda Soomaaliya oo la hadlay SONNA ayaa ...
Akhriso Aqalka sare oo digniin ka soo saaray doorashada Madaxweynaha Koonfur Galbeed
Guddiga joogtada ah ee golaha aqalka sare Baarlamaanka Soomaaliya oo maanta shir saacado badan qaatay ku yeeshay Muqdisho ayaa ka digay in faragelin lagu sameeyo doorashooyinka dhawaan ku soo wajahan maamul goboleedyadda dalka qaarkood. Xoghayaha aqalka sare Cali Maxamed Jaamac oo warbaahinta la hadlay shirka ka dib ayaa sheegay inay ka digayaan faragelin lagu sameeyo doorashada Koonfur Galbeed oo bisha ...
Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, mudane Xasan Cali Khayre, ayaa maanta daah-furay kulan sannadeedka golaha wasiirada ee dar-dar gelinta qorshayaasha qaranka oo looga tashanayo geedi socodka qorshe howleedka mudnaanta iyo hor-tebinta leh ee xukuumaddu fulinayso sannadka 2019. Shirka oo loo qorsheeyay in uu socdo maanta iyo berri ayaa maanta dib loogu eegayay qorshooyinkii wasaaradaha ee sannadka dhammaadka ah, si loo ...
Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo la kulmay Madax ka kala tirsan UNDP iyo UNSOM
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa xafiiskiisa ku qaabilay Mas’uuliyiin ka tirsan Barnaamijka Horumarinta Qaramada Midoobay ee UNDP iyo Xafiiska Siyaasada Qaramada Midoobay ee Soomaaliya,waxa ayna ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin u diyaargarowga doorashooyinka soo socda ee uu dalka geli doono iyo hirgelinta shuruucda doorashooyinkaasi muhiimka u ah. Waxyaabaha aadka ...
Ergeyga Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya oo gaaray Hargeysa
Ergeyga Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Haysom ayaa maanta gaaray magaalada Hargeysa ee Somaliland. Socdaalka Haysom ayaa qeyb ka ah safaro uu ku marayo xarumaha maamulada dalka ka jira, inkastoo Somaliland ku dhawaaqday gooni uga go’day Soomaaliya inteeda kale. Nicholas Haysom ayaa la kulmay Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, iyagoo ka wada hadlay arrimo kala duwan oo quseeya xiriirka ...
Tababar loo soo xiray ciidan ka tirsan ururka 60-aad ee ilaalada Madaxtooyadda+Sawirro
Ciidan ka tirsan ururka 60-aad ee xoogga dalka Soomaaliya ayaa maanta tababar u socday muddo saddex bilood ah loogu soo xiray madaxtooyadda Soomaaliya. Munaasabadda tababarka loogu soo xirayay ciidanka waxaa kasoo qayb galay Abaanduulaha Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliya Sareeye Guuto Odawaa Yuusuf Raage, saraakiil ka socda ciidanka xoogga dalka, wasiiru dowlaha madaxtooyadda Cabdulqaadir Shekh Cali Baqdaadi, Agaasimaha hab-maamuuska xafiiska madaxweynaha ...
Reysal wasaare ku xigeenka dalka Talyaaniga ahna wasiirka arrimaha gudaha dalkaasi, Matteo Salvini, ayaa sharci ku aaddan xaddidda soo galootiga soo saaray dhawaantan. Shan tii bilood ee ugu dambeysay, waxa yaraaday dadkii soo galootiga ah ee imanayay dalka Talyaaniga, kadib markii dowladda dalkaasi ay ka hor istaagtay tiro doonyo ah oo sidey tahriibayaal doonayay inay dalkaasi soo galaan. Doonyahaasi qaarkoood ...
Gudoomiyihii Degmada Howl Wadaag oo xilka laga qaaday iyo Gudoomiye cusub oo la magacaabay
Warar lagu kalsoonaan karo oo heshay Shabakada Allbanaadir ayaa sheegaya in xilka laga qaaday Gudoomiyihii degmada Howl Wadaag Cabdi Kariin Cali Kaar oo xilkaasi hayay mudo sanad ka badan. Wareegto kasoo baxday Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Eng Cabdiraxmaan Yariisow ayaa xilka looga qaaday Gudoomiyihii degmada Howlwadaag halka Gudoomiye cusubna digreetada lagu magacaabay. Sida aan xogta ku heleyno Gudoomiyaha ...
Tuulax oo ka hadlay dhalinyaradii Ciidamada timaha uga jareen Muqdisho
Masuuliyiinta Maamulka Gobolka Banaadir ayaa ka hadlay arin dhalinyarada si wayn u hadal hayeen oo ka dhacday Saldhiga Degmada Xamar Jajab ee Gobolka Banaadir. Gudoomiye ku xigeenka amniga iyo Siyaasadda Maamulka Gobolka Banaadir Maxamed C.laahi Tuulax ayaa sheegay maamulka Gobolka Banaadir inuu baaris ku sameeyay arrin ka dhacday Saldhiga Degmada Xamar jajab oo aheyd in ciidanka timaha ay ka jareen ...
Hay’adda NISA ayaa sheegtay in ay hakisay maanta oo sabti ah Qandaraasyo malaayiin Doollar ah oo baxay sanadihii la soo dhaafay. Warkan ka soo baxay Taliska NISA ayaa sidoo kale lagu sheegay in qandaraasyadan la hakiyay uu saxiixay Wasiirkii Hore Amniga, islamarkaana loo gudbiyay Hanti-dhoorka guud ee Qarank. “Maanta, oo ah 3-da Nofembar 2018, NISA waxay hakisay una gudbisay Hanti-dhowrka ...